ZANAKA AMPIELEZANA TULEAR MONINA ETO ANTANANARIVO : HANOHANA NY DR ROBINSON SY ME HANITRA – MyDago.com aime Madagascar
ZANAKA AMPIELEZANA TULEAR MONINA ETO ANTANANARIVO : HANOHANA NY DR ROBINSON SY ME HANITRA
Nanao fanambarana androany Talata 10 Desambra teny amin’ny foiben’ny kandidan’ny boriborintany voalohany tetsy Isotry ny zanaka ampielezana Toliary monina eto Antananarivo. Nambaran’izy ireo tamin’izany fa manohana ny dokotera Robinson izy ireo. Manohana ihany koa ny kandida solombavambahoaka natolotry ny movansa Ravalomanana Me Hanitra eny amin’ny boriborintany voalohany izy ireo. Maro ny traikefa hananan’ny dokotera Robinson sy ny Me Hanitra hoy izy ireo ka izay no nahatonga anay hanohana azy ireo. Noho izany dia manentana ny zanaky Toliary mipetraka eto amin’ny boriborintany voalohany izy ireo hifidy ny Me Hanitra.
Fisaorana ny zanka ampielezana Toliary ny kandida solombavambahoaka Me Hanitra tamin’ny fandraisam-pitenena izay nataony. Tena faly ny tenako hoy izy ary tonga dia vavany ny antsika. Miara miasa isika. Manana ny anjara toerany eto amin’ny boriborintany I ianareo. Avy hatrany moa dia niaraka nanao porte porte ny delegasiona nitety ireo faritra vitsivitsy.
10 réflexions sur « ZANAKA AMPIELEZANA TULEAR MONINA ETO ANTANANARIVO : HANOHANA NY DR ROBINSON SY ME HANITRA »
ireny nitolona teny Ambohijatovo ireny
Ireto voalaza @ lahatsoratra izay AVY ANY @ faritra ATSIMO ireo ve, tokony nantonina hatry ny ela amin’ny firotsahana ho député any rehetra any!
Efa fantatra hatry ny 2009
fa ry « Mamy Gotso »
no artista mpidoroka PUTSHISTE
Amin’izao manafana an’ireto hafa
mpampihetsika akobo isany
… ry Jerry Marcos
ce mapar des putshistes
still & always one more of PLAGIARISM
@ Me Hanitra: tandremo fa toa mahay misarika olona be koa ilay raika lahy mirotsaka 1er arrondis. manangona olona eny Antsahamanitra an!
11 décembre 2013 à 7 h 56 min
OLONA 20 RAHA BETSAKA!!!!!!!
haingam-piavy be ra-Denise
Filazana ho anareo milasy ao Ambohitsirohitra ireo
==> mihozongozona ny sezan’elahy isany MPAMONO OLONA – MPAMAROTRA TANINDRAZANA isany
En l’ile Sainte Marie ,
l’artiste (rasta) ZAINA est originaire d’AMBOVOBE près Fort Dauphin….
je l’avais rencontré en 2008 à, l’hotel LIBERTALIA
C’est un personnage très sympa…
Peut être intéressant à contacter pour éventuellement donner un coup de pouce aux actions ravalomananistes….
Artiste jeune , sympa , à la mélodie musicale fort agréable….A LANCER ????à entrainer comme groupie ???
Ho montsamontsana ny zanak’i dada amin’io 20 décembre io an!
rehefa voahonga ravalo t@ 2009 dia zao lasa nanakarena zao daholo zao isika malagasy,ka ra vao mody eo iny dia iverina nyfaantrana maty eto sika mianakavy,zao mba 500ar ny kilo ny vary,2000ar ny L menaka,k’aleo tohizana ny tolona t@ 2009 ry denise a!
95% ny gasy MPANEFOEFO daholo manontany ireo 4% MAHANTRA FADIRANOVANA
MITSINDROKA FAKO MIARAKA @ PERA PEDRÔ ô!!!!any ôôô…….
Ho tanteraka tokoa anie izany !!!ary tsy ho ela !!
12 décembre 2013 à 3 h 12 min
Denise. Tena ny vodiny sy ny f no mijery sy ampijerena fa tsy mba ny maso. Tsy mahagaga
12 décembre 2013 à 4 h 12 min
Ka i denise anie ka F o r y vaovao natao ho fialam-bolin’i TGV e! Fa be ny tsy mah alala. Mme denise dia 2e bureau an’i Vôtay kely bandy kely manambady makorely hoy ny hiran’i mamy gôtso! Ary sao dia mba ilay vady faharoa an’i Hery vaovao ihany ary ity F o r y vaovao denise ity e? Mety hifampizarana fa ny foza manko mahay mizara rehefa samy jiolahy. Lasa Hery rajaona + hery Rajoelina = Herimboatay tonta!!!
loaram_baovao misy tanora maro zany zao a!Voatsongo ary ny akabeazany dia mpianatry ny universite,irahana any @toerana maro manerana ny nosy izy ireo maka liste de deleguer de vote anaovana hosoka ka mila mailo tanteraka isika e
Précédent Article précédent : BORIBORINTANY I : ATAONTSIKA FILAMATRA HOY ME HANITRA
Suivant Article suivant : Andian-tsary : Tanambe, Morarano Chrome, Ambatondrazaka, AMPARAFARAVOLA